Ogwe nchekwa cryogenic bụ tankị na-ekpo ọkụ ma ọ bụ nke dị okpukpu abụọ maka nchekwa nchekwa oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide na mgbasa ozi ndị ọzọ. Isi ọrụ bụ imeju na ịchekwa mmiri mmiri dị ala. Categories Obere Nchekwa tank, Vertical Nchekwa tank The cryogenic nchekwa tank bụ a vetikal ma ọ bụ kwụ abụọ-oyi akwa agụụ mkpuchi mmanụ maka na ịchekwa mmiri mmiri oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide na ndị ọzọ na media. Isi ọrụ bụ imeju na ...
Igwe nchekwa kriyonọm nke kwụ n'okpuru ezigbo ikike na nrụgide, a na-ahazi tankị nchekwa cryogenic nke ọma iji chekwaa ụgwọ ma belata oge nnyefe. A na-enye ọtụtụ nhọrọ modul bolt iji mezuo ọtụtụ ngwa chọrọ. Nkọwapụta ewepụtara Runfeng na-enye tankị nchekwa gas dị ọkọlọtọ na nkọwa abụọ, vetikal na kwụ, yana nrụgide arụ ọrụ kachasị ekwe ka galọn 900 ruo 20,000 (lita 3,400 ruo 80,000). 175 ka 500 psig (12 ka 37 barg). N'okpuru ezigbo capa ...
Okwu mmalite nke Ansuda obere tank mmiri mmiri cryogenic bụ ụdị obere akụrụngwa gas jikọtara ya na ntọala ya na akwa agụụ multi-layer adiabatic cryogenic liquid tank tank ma kwadebere ya mmiri cryogenic na-ejuputa na sistemu vaịn na-arụ ọrụ onwe ya. Categories: Ansuda, Obere Nchekwa Mmiri Ugbu a, Ansuda obere tank mmiri mmiri cryogenic, dị ka usoro ikuku gas dị mfe ma dị mma nke na-anọchi nchara silinda na Dewars, ka ejiri mee ebe na ...
Jointzọ nkwonkwo ST-10C
Ot Slotted Domed mgbapụta Disk (LF Type)
Otutu Slotted Domed Rupture Disk mejuputara uzo ihe eji eme ihe na ebe a na-emechi ihe. Mgbe nrụgide gabigara ókè na sistemụ echedoro, diski ahụ na-agbasa n'akụkụ ahịrị iji nye aka zuru ezu. Dị Condị Nkịtị Na-ahụ Maka Igwe Na-ahụ Maka Ihe Na-akpata Mgbapụta (LF) Ezubere maka gas, mmiri mmiri, ọrụ uzuzu. Oke nrụgide na-arụ ọrụ ruo 80% nke kachasị njọ. Ole na ole iberibe agbamume ...